Global Voices teny Malagasy » Fanavaozam-baovao NewsFrames Global Voices · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Jolay 2019 7:52 GMT 1	 · Mpanoratra Ivan Sigal Nandika Raveloaritiana Mamisoa
(Lahatsoratra efa tamin'ny taona 2016)
Maodely santatra voalohany amin'ny fafana NewsFrames Global Voices, avy amin'i Sands Fish, Mey 2016.
Manakaiky ny fanombohan'ny tetikasa NewsFrames isika. Hanasonia ny fifanarahana amin'ny Digital News Initiative an'ny Google  isika amin'ity herinandro ity, ary hanambara ny asa voalohany mifandraika amin'ny tetikasa, dia ny talen'ny tetikasa.
Raha tsiahivina , hamorona fitaovana nomerika sy dingana famoahana ho an'ny fandalinana haingana ny endrika sy ny fironana media antserasera eo amin'ny tsenan'ny fampitam-baovao manerantany ity tetikasa ity, ary hitarika fikarohana amin'ny resadresaka, ny vaovao ary ny mediam-bahoaka manerantany. Kinendrintsika ny hamintina ireo tantara sy lohahevitra malaza, lehibe sy zara raha taterina isaky ny firenena ary ireo tantara mifototra amin'ny angon-drakitra sy olana mivaingana azo avy amin'ny fikarohana.
Manantena izahay fa raha mahomby ity tetikasa ity, dia hotohizana ho ampahany manan-danja amin'ny asa Global Voices. Mihevitra ireo andiana fitaovana sy mpiara-miasa ho toy ny loharano ho an'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices izahay
Namoaka tolotr'asa  talen'ny tetikasa izahay; hatramin'ny 20 Jona 2016 ny fara-fametrahana ny fangatahana.
Mba hananganana izany fitaovana izany sy ny dingana famoahana, dia miara-miasa amin'ny Media Cloud izahay, fitaovana fikarohana angona misokatra izay manadihady ireo fanontaniana sarotra marobe momba ny media antserasera amin'ny alalan'ny fanarahamaso ireo loharanom-baovao amin'ny media sosialy sy haino aman-jery maherin'ny 260.000. Ny Media Cloud moa dia tetikasa iraisan'ny MIT Media Lab  sy ny Berkman Center for Internet & Society  ao Harvard.
Tamin'ny volana lasa teo, nanatontosa fivoriana fandinihana roa niaraka tamin'ny Sands Fish , iray amin'ireo mpikaroka miasa ao amin'ny Media Cloud ao amin'ny MIT Media Lab, miaraka amin'i Ethan Zuckerman  izahay. Tamin'ny dingana voalohany nataonay dia nametra-kevitra mpiserasera idealy izahay, ary namorona karazam-pitaovana ho an'ny tontolon'ny asa ho an'ireo mpandray anjara ato amin'ny Global Voices mba hamoronana sy hitantanana ireo fangataham-pikarohana amin'ny angon-drakitra Media Cloud.
Ohatra, alaivo an-tsaina hoe te-hanaraka ny resadresaka sy vaovao manodidina an'i Etiopia sy ny fanagadrana ireo mpikatroka ny talen'ny Advox Ellery Biddle. Tianay ny fitaovana ahafahana mametraka ireo voambolana karohina, ny refin-daza sy ny fiverimberenena mandritra ny fotoana, ary manatontosa fanadihadiana amin'ny fomba hanoritan-joro ireo tantara ireo. Moa ve noresahana hatrany ny lohahevitra tao anatin'ny tokotanin'ny fampihorohoroana? Notononina ihany koa ve ireo mpikatroka ny zon'olombelona? Inona no tsy hita ao amin'ny endrika tantara isan-karazany?
Noresahinay ihany koa ny hevitra fahazoa-mampiasa fitaovana. Moa ve notehirizina ho famantarana sy karatra ireo lohahevitra tsirairay nosaratsarahana? Azontsika avela hizara fikarohana iray ve ny mpisera maro? Afaka manambatra angon-drakitra fikarohana rehetra ve isika? Mila fahaiza-manao manokana na fotoam-pampianarana ve isika amin'ny fampiasana ny fitaovana, sa ho mora takatra sy misokatra ho an'ny rehetra izany? Fanontaniana maro hotsongaina ary fanamby lehibe ho antsika!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/11/141379/
 Digital News Initiative an'ny Google: https://www.digitalnewsinitiative.com/fund/
 Media Cloud : http://mediacloud.org/